Fitaovana fitetezana rivotra an-kalamanjana any ivelany any ivelany miaraka amin'ny mpanamboatra sy mpamatsy | , resintsika noho ny
1. Masoandro: Manana 50+ UPF hanakanana taratra UV manimba ary hanampy hiaro ny hoditrao, fitaovana manokana misy coating anti-UV izay nandalo ny fitsapana UPF 50+. izay tena miaro UV. Raha atambatra amin'ny Wide sy Long Visor Design, ny lohanao, ny tavanao, ny oronao ary ny hatokao dia azo rakofana tsara. Izy io dia miaro anao amin'ny sun burn tsara kokoa. Breathable maina maina haingana: Amin'ny alàlan'ny fampiharana lamba maivana sy hamandoana ary famolavolana harato goavambe, mitondra anao milay sy mahazo aina be. Ny satroka dia afaka maina vetivety aorian'ny fanasana
2. Mandinika: taratra ny sisiny sy ny sisiny. Ny satroka tsara indrindra amin'ny hazakazaka amin'ny alina, Namboarina miaraka amin'ny fampiononana ao an-tsaina - Ireo takelaka fitsangantsanganana an-kalamanjana amin'ny rivotra miaraka amina fonosin'ny vozony azo esorina dia maivana loatra ka ho hadinonao mora foana ny mitafy azy. Izy io dia mahafeno ny fepetra takiana rehetra amin'ny fampiononana sy ny fiasa. Miaraka amina endrika marevaka sy fitantanana famonosana hamandoana be dia be ianao, azonao antoka fa ireo satroka mihazakazaka tarehin'ireto lehilahy ireto dia hanampy anao hahatratra ny tsara indrindra vitanao ary hahatsapa ho mahazo aina ianao.
3. Fandroahana rano: ny satroka fanatanjahan-tena tsy vita dia afaka misoroka ny orana maivana na ny famaohana hazavana. Ny effes lotus dia hahatonga ny rano mitete ho voajanahary tsy misy fisehoan-javatra mivoaka ao anaty fotoana fohy! Sweat Band: bandy hatsembohana mety sy ahazoana aina. Stitch Crimping: matevina kokoa izy ary maharitra amin'ny crimping stitch. Fanitsiana tsangambato majika avo lenta: tsy misy bokotra azo ovaina ao ambadiky ny satroka, ny hood dia azo ahitsy arakaraka ny refin'ny loha samihafa. Famolavolana satroka vaovao.
4. Mety ho an'ny: Ny satroka fitsangantsanganana an-kalamanjana an-kalamanjana dia mihazakazaka manjono an-tokotany an-kalamanjana Mountaineering Gym Night jogging camping. Fanomezana tsara dia tsara avy any an-tokotany mivalona ivelany, Cap mihazakazaka eny ivelany.
★ Tongasoa ny kaomandy OEM ho an'ny Fitsangatsanganana an-kalamanjana any ivelany satroka ary karazana hafa.
ambany dia ny Antsika hafa Fitsangatsanganana an-kalamanjana any ivelany satroka, azafady mba lazao anay ny satroka mety aminao na alefaso ny volonao, misaotra.
Teo aloha: Satroka fanatanjahan-tena tsy voarindra ho an'ny lehilahy sy vehivavy UPF 50+ mihazakazaka ivelany mihazakazaka
Manaraka: Satroka fanatanjahan-tena azo antoka amin'ny masoandro miaro amin'ny masoandro amin'ny golf Tennis